3G, 4G LTE, 5G & WiFi, fitsapana ny browsing ary ny streaming - QoS ny Android sy ny iOS - nPerf.com
Afaka segondra vitsy, andraso ny bitrate, latency, ny hafainganana ary ny kalitaon'ny streaming video amin'ny findainao.
Ny menio mihetsiketsika dia ahafahanao manomboka isaky ny fitsapana:
• Fitsapana hafainganam-pandeha (Bitrate & Latency)
• Fitsapana fizahana fizahana
• Fitsapana mivantana
rehetra dia voatahiry ao anaty tantara miaraka amin'ireo toerana fitsapana rehetra eo amin'ny sari-tany.
Ampitahao amin'ny valin'ny an'ny mpampiasa hafa ny valiny, ary isaky ny mpamatsy isaky ny refy. Mizara mora foana ny valiny amin'ny tambajotra sosialy amin'ny fizarana sary nPerf izay manome famintinana mahasoa ny fitsapana anao.
Ataovy miavaka ny fampiharana anao amin'ny alàlan'ny fanovana ny loha-hevitra any ambadika amin'ny alàlan'ny menio Settings eo amin'ny zorony ambony havanana na amin'ny bokotra "menio" an'ny fitaovanao
nPerf dia miankina amin'ny teknolojia ambony an-trano sy tamba-jotra mpizara manerantany izay afaka mamoaka ny bitrate ilainao.
Pikantsary tamin'ny Tablet Android - fivoarany
Pikantsary tamin'ny Android - Valina fitsapana feno
Pikantsary tamin'ny IPhone - Fitsapana famakiana pejy internet
Miaraka amin'ny nPerf dia tsy hanapoaka ny drafitra angon-drakitrao ianao: miaraka amin'ny fanatsarana marobe, ny data amin'ny andrana dia avo roa heny noho ny fitsapana mifaninana. Ho fanampin'izay, ny fampahalalana data dia hampandre anao raha toa ka nihoatra ny faran'ny volana azonao apetraka amin'ny menio fikirana.
Ny karazana fifandraisana rehetra dia azo zahana mihoatra ny 1 Gb / s!
Andramo ny fifandraisanao, hamarino ireo olan'ny fifandraisana ary tazomy ny serivisy Internet sy ireo mpitatitra anao!